Safal Khabar - दुनियाँको एउटामात्र घडी, जसमा कहिल्यै १२ बज्दैन !
दुनियाँको एउटामात्र घडी, जसमा कहिल्यै १२ बज्दैन !
सोमबार, १६ असार २०७६, २० : ३८
एजेन्सी । १२ अंकलाई धेरैले अशुभ मान्दछन् । कसैलाई दशा लाग्दा वा आपत पर्दा मेरो त बाह्र बज्यो भन्छन् धेरै मान्छेहरु । बाह्र बजेको समय पनि धेरैले अशुभ काल ठान्छन् र कतै यात्रा गर्दा बाह्र बजेको समय छल्ने गर्दछन् । तर जति छले पनि एक दिन अर्थात् २४ घण्टामा २ पटक त बाह्र बजेरै छाड्छ घडीमा ।